सरकारको मेसिन थन्क्याएर निजीलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २० कार्तिक २०७५, मंगलवार November 6, 2018
काठमाडौं । सरकारले मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाइसेन्समा स्तरोन्नति गर्‍यो। सुरुमा साबिक बागमती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स २०७४ मा आइपुग्दा देशभर लागू भयो। तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि ट्रायल पास गरेको १७ महिनासम्म स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ। यातायात विभागले लेजर प्रिन्टर (खोपेर लेखिने) मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ।
तर, गत असोज २९ मा सरकाले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ (सामान्य लेखाइ) विधिबाट पाँच लाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार मालिकाले कात्तिक ४ देखि कार्ड प्रिन्ट गरेको समाचार कारोबार दैनिकमा छ। विभागले आफूसँग भएका आठ वटा प्रिन्टरमध्ये पाँच वटाबाट मात्र प्रिन्ट गर्दै आएको छ। विभागले सुरुमा सम्झौता भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको मनपरीलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेको अवस्था आएको विभागका एक प्राविधिकले बताए।
मेघ गर्जन र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना, कस्तो रहन्छ आगामी तीनदिन ?
काठमाडौं । देशका अधिकांश स्थानको मौसम शनिबार आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले […]
काठमाडौं । ललितपुरका नाम चलेका र महँगा स्कुलले नै राज्यलाई कर तिर्न आनाकानी गरेका छन् । ललितपुर महानगरको […]
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएको फागुन २८ मा भएको यूएस-बंगाल एयरलाईन्स जहाज दुर्घटनाको […]
मकालुमा भेटिएको भनिएको ‘यति’ के हो ? यो भन्दा पहिले यसरी भएको थियो ‘यति’बारे अनुसन्धान
काठमाडाैं । भारतीय सैनिकले मकालु बेस क्याम्पको आरोहणको क्रममा यतिको पाइला भेट्टाएको दाबी गरेको छ । भारतीय […]